Mareykanka & Midowga Yurub oo War kasoo saaray Go'ankii Farmaajo - Awdinle Online
Mareykanka & Midowga Yurub oo War kasoo saaray Go’ankii Farmaajo
Wakiilka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Berlanga oo ayaa soo dhoweeyey Talaabaddii Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta qaaday iyo go’aanka Gollaha Shacabku ku aqbaleen Codsigii Madaxweynaha ee ahaa in dib loogu laabanayo heshiiskii 17-kii September.Safiirka midowga Yurub iyo Safaaradda Maraykanka ayaa ku booriyey dhinacyadda innan Wax shuruud ah lagu xidhin hirgelinta Heshiiskii 17-September.
Safiirka Midowga Yurub ayaa ku booriyey dhinacyadda innaan Wax shuruud ah lagu xirin hirgelinta Heshiiskii 17-September lana muujiyo taageero wax dhiseyso oo dhinaca Maamul Goboleedyada ah.
Dhinaca kale Saraaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa soo dhaweeay tallaaadii ay qaadeen Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ahaa mid la wada sugaayay.
“ Waxaan soo dhaweeyneeynaa tallaabada ay Maanta qaadeen Madaxweynaha iyo Golaha Shacabka iyo doorka Ra’iisul Wasaaraha ku leeyahay hirgelinta doorashada, waana in si deg deg ah loo qabtaa doorasho loo dhan yahay ayaa lagu yiri” Qoraalka Saraafadda Mareykanka ee Muqdisho.
Xubnaha Mucaaradka ayaa dhankooda soo dhaweeyay tallaabada ay maanta qaadeen Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Xildhibaannada Golaha Shacabka, iyaga oo ka laabtay arrintii muddo kordhinta.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilat Wafdi ka socda Dowladda Qatar
Next articleBulshada Rayidka oo qoraal kasoo saaray Ciidamadii ku dagaalamay Muqdisho